“Tafan-gilita”: hampiaraka talenta ry Mbola, i Nini, i Jovin ary i Hoby | NewsMada
“Tafan-gilita”: hampiaraka talenta ry Mbola, i Nini, i Jovin ary i Hoby
Mahalaza be ny anaran’ny tetikasa sy ireo mpanakanto… Azo sary an-tsaina avy hatrany fa anjoria mozika ny hiseho anatin’ny “Tafan-gilita”.
Tsy vitan’ny hoe samy zanaky ny mangotraka fa sady samy ikoizana izy efa-dahy. Maro ireo mpitendry gitara amin’izao fotoana izao, saingy misongadina amin’ireny ry Nini Kaolibera, i Jovin, i Hoby ary i Mbola Talenta. Nosafidina manokana, hanatontosa ilay tetikasa “Tafan-gilita” izy efatra mirahalahy ireto.
“Faniriana efa ela ny anay efa-dahy ny hiara-hiasa toy ny tarika iray, anaty tetikasa iray. Ny mi’Ritsoka Production no hanantanteraka izany fanirianay izany, ary mifanojo ny fikasana”, hoy ny fanazavan’i Mbola Talenta. “Tetikasa nitsiry taorian’ny faniriana hanao seho goavana iray mifototra amin’ny tendry gitara io. Maninona moa raha mba homena sehatra indray ireo mpitendry fa tsy ho takona hatrany ao an-damosin’ireo mpihira? Maninona raha hasongadina ireo tanora mpandimby amin’ny vazo an-gitara? “Teraka teo ny “Tafan-gilita”…”, hoy ny nambaran-dRandriamampianina Hery, tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny mi’Ritsoka Production.
Ho fisantarana ny fiarahana, hotontosaina ny asabotsy 30 oktobra ho avy izao, manomboka amin’ny 4 ora tolakandro, eny amin’ny tanàna Zoari, Manahy Ilafy, ny “Tafan-gilita”. Raha ny fandaharan-kira, tena fampisehoana hitety vanim-potoana maro izany. Vanim-potoana nanjakan’ny kalo an-gitara, haverin’izy efa-dahy araka ny rindra hanaovany azy. “Tsy mifanitsaka fa mifanasongadina izy efa-dahy, ary izany ny tena herin’ity fiarahana ity. Mahazo aina vao avokoa ireo hira rehetra izay nosafidina”, hoy hatrany ny nambaran’ny mpamokatra. Hira 40 mahery, santionany amin’ireo sanganasan’ireo mpanakanto maro nanamarika ny vanim-potoana rehetra, nanjakan’ny kalo an-gitara, no alahatra mandritra ny fiarahana. Anisan’ireny ny sanganasan-dry Razafimahefa, Razilinah, i Fredy Ranarison, i Kaolibera, ny Feo Gasy, i Erick Manana, ry Mahaleo, ry Lolo sy ny tariny, i Tselonina, i Levelo, i Son, Ifanihy, Iraimbilanja, i Nôno, Raberanto, i Johary, ry Tsiakoraka, sns.